Solvent Yero 185 / CAS 27425-55-4
Solvent Yellow 185 idhayi yakasvibirira yefluorescent.
Iyo ine yakanaka yekudzivirira kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka kuramba kutama uye yakakwira tinting simba ine yakakura application.
Unogona kutarisa TDS ye Solvent Yellow 185 pazasi.
Solvent Yero 179 / CAS 80748-21-6
Solvent Yellow 179 idhayi yakasvibirira yero inoonekera.
Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka migration resistance.
Inogona kushandiswa mukupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer, faibha, kudhinda inki.
Yakanyanya kukurudzirwa kune polyester fiber.
Unogona kutarisa TDS yeSolvent Yellow 179 pazasi.
Solvent Yero 176 / CAS 10319-14-9
Solvent Yellow 176 idhayi yemafuta inonyungudutsa yero.
Kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer, faibha, ingi.
Tinogona kupa Solvent Yero 176 SPC uye mono-masterbatch.
Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 176 pazasi.
Solvent Yero 163 / CAS 13676-91-0/106768-99-4
Solvent Yellow 163 idhayi yakatsvuka yero inopenya inonyungudutsa mafuta.
Solvent Yellow 163 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer, fiber.Zvinokurudzira kushandiswa mumotokari machira, ingi kusanganisira inkjet ingi.
Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 163 pazasi.
Solvent Yero 160:1 / CAS 35773-43-4
Solvent Yellow 160:1 idhayi yakasvibirira yefluorescent.
Solvent Yellow 160: 1 inotenderwa kushandiswa mupolyester fiber, uye shoma inoshandiswa muPA6 fiber.
Unogona kutarisa TDS yeSolvent Yellow 160:1 pazasi.
Solvent Yero 157 / CAS 27908-75-4
Solvent Yellow 157 idhayi yakasvibirira yero inopenya inonyungudutsa mafuta.
Solvent Yellow 157 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polymer, fiber.Inokurudzirwa kushandiswa mumotokari machira.
Ndokumbira utarise TDS yeSolvent Yellow 157 pazasi.
Solvent Yero 114 / CAS 7576-65-0/75216-45-4/12223-85-7
Solvent Yellow 114 idhayi yakasvibirira yero inonyungudutsa.
Solvent Yero 114 ine yakanaka yekudzivirira kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka kutama kusimuka uye yakakwira tinting simba nekushandisa kwakakura.
Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS PET ABS PC (polyolefin, polyester, polycabonate) mapurasitiki, faibha uye inki yekudhinda.
Kufanana kwayo ndeye Solvaperm Yero 2G, Yero GS, Yellow G.
Solvent Yellow 114 inozivikanwawo seDisperse Yellow 54 yeinki, kusanganisira inkjet ink.
Unogona kutarisa TDS ye solvent Yellow 114 pazasi.
Solvent Yero 98 / CAS 12671-74-8/27870-92-4
Solvent Yellow 98 idhayi yakasvibirira yefluorescent.
Solvent Yellow 98 inotenderwa kushandiswa mupolyester fiber uye PA6 fiber, shoma inoshandiswa muPA66 fiber.
Unogona kutarisa TDS ye Solvent Yellow 98 pazasi.
Solvent Yero 93 / CAS 4702-90-3/61969-52-6
Solvent Yellow 93 idhayi yemafuta inonyungudutsa yero.Solvent Yero 93 ine yakanaka yekudzivirira kupisa uye mwenje kuramba, yakanaka kutama kusimuka uye yakakwira tinting simba ine yakafara application.Solvent Yero 93 inoshandiswa kupenda mapurasitiki, PS PET ABS PC (polyolefin, polyester, polycabonate) mapurasitiki, faibha.Unogona kutarisa TDS ye solvent Yellow 93 pazasi.
Solvent Yero 72 / CAS 2481-94-9
Solvent Yellow 72 idhayi yakatsvuka yero inonyungudutsa.Iine kunaka kwekudzivirira kupisa uye kukurumidza kwechiedza.Inoshandiswa kupenda mapurasitiki, polymer, fiber, rubber, wax, mafuta, lubricant, mafuta, peturu, kenduru, pendi, inki yekudhinda. Ndapota tarisa TDS ye Solvent Yellow 72 pazasi.